Matsgbọ ala Mats
TPR Matsgbọ ala Mats
TPE Matsgbọ ala Mats
Akpụkpọ anụ Car Mats
Kapeeti Car Mats
TPR akpati ute
TPE ogwe ute
TPE / TPO / TPR Ihe
Ndepụta ụdị TPE ụgbọ ala emelitere na Machị 2021
Anyị Shaoxing Huawo Auto Parts Co., Ltd bụ ọkachamara na imepụta ụgbọ ala. Anyị nwere ike imelite ụdị nke ụgbọ ala ute dị ka ngwa ngwa o kwere mee. Ọ bụrụ na ụdị ụgbọ ala ị chọrọ anaghị etinye na ndepụta ihe nlereanya anyị, biko kpọtụrụ anyị ozugbo, anyị nwere ike ịmechaa ya ngwa ngwa, nabata ma ọ bụrụ na ị nwere laser laser ...
Ihe niile I Kwesịrị Knowmara Maka Matsgbọ ala Matsgbọ ala
Mgbe anyị kwesịrị ịzụta ụgbọ ala ala ute, olee otú ịchọta ndị kasị mma emeputa? Nwere ike ịchọ na Google site na "ụlọ ọrụ nrụpụta ụgbọ ala", mgbe ahụ ị nwere ike ịchọta ọtụtụ weebụsaịtị, yana ịkwesịrị ikpe ikpe nke ụlọ nrụpụta ụgbọ ala ị chọrọ, yana ịlele ihe eji etinye ụgbọ ala bụ ihe ịchọrọ. Enwere di ma ọ bụ nwunye dị iche iche ...
Kedu ụdị akwa ụgbọ ala dị mfe nhicha?
Dị iche iche ihe na Njirimara ụgbọ ala n'ala ute bụ dị iche iche na-asa ụzọ. Isi ike nke ịsa ahụ dịkwa iche, ụgbọ ala ụgbọ ala ugbu a jikọtara ya na ihe ndị a dị iche iche: kapeeti, ihe mgbochi ụgbọ ala roba, pvc car car na TPE / TPR car car. Ka anyị kọwaa ihe dị iche na mmiri ...
Olee otú iji ala ụgbọ ala gị na ute afọ 20 ogologo?
Mgbe ị ghọrọ nne, ị nwere ike iji ọrụ n'aka kwa ụbọchị iji hụ na a na-elekọta ezinụlọ ọ bụla anya nke ọma. I nweghi oge ihicha ime ụlọ, i nweghi oge ihicha ugbo ala gi. Oge pụtara na ihe ọ bụla, ị nweghị ike ichere obere oge, ịchọrọ ịchọta ụzọ iji nye onwe gị ezumike. Na ho ...
Etu esi ahoputa ugbo ala nke ugbo ala gi?
Mgbe ị zụrụ ụgbọ ọhụrụ, ịkwesịrị ịzụta ihe ụgbọ ala n'otu oge. Huawe auto akụkụ Co., Ltd na-enye ọtụtụ ụdị ụgbọ ala na akpati iji chebe ụgbọ ala gị. Anyị ga-ewebata nke bụ ala kacha mma. maka gị. Kedu ụgbọ ala m ji dabara ụgbọ ala m? Mgbe ị gara na nke anyị ...
Modelsdị ụgbọ ala ole ka anyị nwere?
Huawo Auto Parts Co., Ltd bụ ụlọ ọrụ TPE ụgbọ ala na-emepụta ọtụtụ ebu maka ụgbọ ala na akwa ute. Anyị nwere akwa ụgbọ ala na mpempe akwụkwọ akwa maka Toyota, Honda, Land Rover, BMW, Jeep, Porsche, Mercedes-Benz, Chevrolet, Cadillac, Ford, Nissan, Lexus, Audi, Das Auto, Volvo, Jaguar, KIA, Mazda, Tesla , Mitsubishi Motors, Bui ...
Kedu ihe kpatara ihe TPE ji eji na inlọ ọrụ ụgbọ ala
Site na oche ochie na ụgbọ ịnyịnya na ụgbọ ala nke oge a, ngwa ọrụ ndị mmadụ na-emeziwanye. Iji nwekwuo nkasi obi, ụlọ ọrụ ụgbọ ala TPE mepụtara ihe eji eme ka ụgbọ ala TPE pụtara n'ihu ọha. Thermoplastic elastomer TPE ka nke SEBE base ihe agwakọtara na mmanụ ọcha na oth ...
TPE ihe eji aru ala: gini bu uru nke ihe eji aru ala nke TPE?
TPE bụ n'ezie ụdị ihe eji arụ ọrụ nke nwere akwa nrụgide yana ike mkpakọ. Dị ka ductility nke mmepụta na nhazi ihe TPE nwere ike ịmepụta iji mee ka ọ dị iche. Ugbu a, TPE floor mats abụrụlarị otu n'ime ihe ndị bụ isi na ngalaba nke mmepụta na ...
Kedu ụdị ụdị akwa ụgbọ ala ndị chọrọ ịgafe obodo chọrọ!
Matsgbọ ala ụgbọ ala dị mkpa n'ọtụtụ ịkwọ ụgbọ ala kwa ụbọchị, na mba ndị ọzọ na-eburu ibu ọrụ nke mgbochi na-echekwa ahụ ụgbọ ala ahụ.Ma ọdịbendị akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ ọdịnala na-egbochi mmiri bụ izugbe, enweghị ike iburu mmiri apịtị mgbe mba gafere. .A n'otu oge, mgbanwe bụ ogbenye, unde ...
PEgbọ ala TPE bụ ihe ndị na-eme n'ọdịnihu
Ugbo ala ụgbọ ala maara nke ọ bụla nwe ya ， n'agbanyeghị na ọ sitere na ụlọ ahịa ụgbọ ala 4S dị ka onyinye, ma ọ bụ zụta onwe unu, ụgbọ ala ụgbọ ala bụ nke mbụ ụgbọ ala ị chọrọ. Dị ka nchịkọta nke mmiri na-egbochi mmiri, mgbochi mmiri, mgbochi mmiri, ụgbọ nchebe na otu n'ime ụgbọ ala ụgbọ ala, na ahịa ụgbọ ala ...
Jiri nwayọ metụ ala aka kwa ụbọchị, kedu esi ehicha ụgbọ ala Automotive?
Gbọ ala bidoro dị ka ngwa ijegharị, ya mere ọ na-agba n'èzí kwa ụbọchị, enwere ọtụtụ gburugburu ebe obibi, ebe ụfọdụ nwere ọtụtụ apịtị ma ọ bụ ntụ, dị oke unyi, yabụ ebe ụgbọ ala ahụ ruru unyi, anyị enweghị ike iguzo ọ, mgbe ahụ, esi ehichapu ebe a na-akpachapụ akpaka? Ka Shaoxing Huawo Auto Parts Co ....
Olee otú ịhọrọ ọkpụrụkpụ nke ụgbọ ala n'ala ute?
Ugbu a ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ezinụlọ niile nwere ụgbọ ala, onye ọ bụla nwe ụgbọ ala hụrụ ụgbọala ya n'anya. Iji mee ka ụgbọ ala ahụ dị ọcha, ha ga-azụta ụdị ngwa ngwa ụgbọ ala niile, akwa ụkwụ ụgbọ ala dị mkpa, mana ọkpụrụkpụ nke ala ala ụgbọ ala dịkwa dị iche iche, yabụ kedu ọkpụrụkpụ adabara? Footgbọ ụkwụ ụkwụ ụkwụ dị iche na ...
Onye njikwa: Welden wu
Ozi ịntanetị: info@tpecarmats.com
Emelitere TPE ụgbọ ala ụdị nlereanya na March ...
Ihe niile ị chọrọ ịma maka ụgbọ ala F ...